Shiinaha Desmodur RE / Isocyanate RE oo loogu talagalay xabagta CAS 2422-91-5 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Aragtida
Desmodur RE / Isocyanate RE oo loogu talagalay xabagta CAS 2422-91-5
Our RE waa wakiil firfircoon iskutallaabta isku xidha, Waxaa loo adeegsadaa xabagta ay sameyso hydroxyl polyurethane, caag dabiici ah ama caag ah, waxay leedahay awood isku xirnaan wanaagsan oo caag ah iyo cab loo isticmaalo xabagta, antioxidant, wakiilka balaastigga, cadaadis xasaasi ah waxaa loo isticmaali karaa sida iskutallaabiyaha halkii laga isticmaali lahaa BAYER's Desmodur RE.
Xabagta sare ee waxtarka leh ee Isocyanate RE ayaa beddeli karta DESMODURE RE
Magaca Kiimikada: Triphenylmethane-4,4 ', 4' '- triisocyanate
Qaaciddada Molecular: C22H13N3O3
Qaaciddada qaabdhismeedka: HC [NCO] 3
Cufnaanta: 1.0g / c m3, 20 ℃
Barta dhalaalida: 89 ℃
Guryaha Product & Features
Koolo labo-qaybood ah waa in loo adeegsadaa muddada lagu dabakhi karo ka dib marka la geliyo RE. Dhererka mudada la isticmaali karo kaliya kuma xirna nuxurka polymer-ka ee koollada, laakiin sidoo kale waxay la xiriirtaa qaybaha kale ee la xiriira (sida cusbada, antioxygen, bacrimiyaha, dareeraha, iwm.) .Marka ay ku dhowdahay muddada ku habboon, badanaa saacado yar ama hal maalin oo shaqo waxay noqoneysaa mid dhib badan in la shaqeeyo, dareeraha jirka ayaa si dhaqso ah u kordha. Ugu dambeyntiina, wuxuu noqdaa jelly aan dib loo celin karin. 100 xabag oo tayo leh, Hydroxyl polyurethane (Xisaabta Polyurethane qiyaastii waa 20%), Qiyaasta RE 4-7. , Our RE wuxuu sameeyaa 4-7.
Fadlan ku kaydso weel asal ah oo ka hooseeya 23 ℃, badeecadaha waa la ilaalin karaa iyagoo deggan 12 bilood. Waxay aad ugu nugul tahay inta badan; waxay soo saari doontaa kaarboon laba ogsaydhka iyo uruurada aan la milmi karin ee falcelinta biyaha. Haddii soo-gaadhista hawo ama iftiin, waxay dedejineysaa midabbada isbeddela, laakiin shaqada la taaban karo ma saameyn doonto.
Nafwaayay (20 ℃)
Muuqaalka ： Jaale cagaar ah ama bunni casaan ah oo dareeraha jilicsan mugdi ah. Midabkeedu ma saameynayo xoogga jirka.
Hore: Nadaafad sare 99% (S) -3-Amino-1-N-Boc-piperidine cas 625471-18-3
Xiga: Koollo RFE / DESMODUR RFE CAS 4151-51-3
Koollo RFE / DESMODUR RFE CAS 4151-51-3